ॐ ॐ ॐ मुक्तिनाथ बाबाकाे दर्शन गरी हेर्नुस १८ पुष आइतवारकाे राशिफल कस्ताे छ दिन दशा ?
January 1, 2022 January 2, 2022 N88LeaveaComment on ॐ ॐ ॐ मुक्तिनाथ बाबाकाे दर्शन गरी हेर्नुस १८ पुष आइतवारकाे राशिफल कस्ताे छ दिन दशा ?
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल पुस १८ गते आइतबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २ तारीख पौष कृष्णपक्ष औंसी तिथी मुल नक्षत्र बृद्धि योग नाग करण चन्द्रमा धनु राशिमा आनन्दादि योगमा सिद्धि योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणाय हेमन्त ऋतु दर्शश्राद्ध,स्नानदान औंशी, गयामौनीरपौषी औंशी,वेत्रावती,विष्णुपादुका,वराहक्षेत्र गोकर्णश्राद्ध, निशि बार्ने, हलो बार्ने औंशी वास्तवमा ज्योतिषशास्त्रमा शुभ र अशुभ घडीहरू […]
January 1, 2022 N88LeaveaComment on मोडल रियाशाको प्रश्न ‘महिना’वारी भएकाले छुँदा कसैलाई दाग लाग्यो कि, एलर्जी भयो कि?’ (भिडियो)
मेरो पहिलो महिना’वारी चौध वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला म कक्षा सातमा पढ्थेँ। जाडोयाम भर्खर सुरू भएको थियो र बिहान स्कुल जाने बेलामै मलाई हल्का पेट दुखिरहेको थियो। त्यो दुखाइ अन्य बेलाभन्दा अलि फरक थियो। ग्यास्ट्रिकले दुखेको होला भनेर मैले त्यति वास्ता गरिनँ। तर स्कुलमा हुँदा नै दिउँसोतिर मलाईमहिना’वारी भयो। सुरूमा त म हि […]
रामकुमारी झाँक्री बल्ल आइन् लाइनमा, केपी ओलीलाई सम्झिएर धरधरी रोइन् !
January 1, 2022 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाँक्री बल्ल आइन् लाइनमा, केपी ओलीलाई सम्झिएर धरधरी रोइन् !
गुल्मी । शहरी विकासमन्त्री तथा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्री बल्ल आएकी छन् । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सम्झेर भक्कानिएर रुन थालेकी हुन् । एमालेलाई धेरैले केपी ओली पर्यायको रुपमा समेत व्यंग गर्ने गर्छन् । झाक्री रोएपछि धेरैले ओलीलाई सम्झिएर झाक्री रोएको टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् […]
२०२२ सालको जन्‍म कुंडलीमा बनेकाे छ ‘काल सर्प योग’, यी ४ राशिको जीवनमा मच्चिदैछ हलचल !
January 1, 2022 N88LeaveaComment on २०२२ सालको जन्‍म कुंडलीमा बनेकाे छ ‘काल सर्प योग’, यी ४ राशिको जीवनमा मच्चिदैछ हलचल !
काठमाडाैं । शनिबारबाट नयाँ वर्ष सन् २०२२ सुरु भएको छ, यो वर्षबाट आम मान्छेहरूले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तर २०२२ को जन्म कुंडलीमा काल सर्प योगको पर्नु केही राशिका लागि निकै भारी हुन सक्छ। वास्तवमा २०२२ साल सुरु भएको बेलामा त्यस समयका ग्रह र नक्षत्रका आधारमा राशिफल तयार हुँदैछ । कालसर्प योगलाई ज्योतिष शास्त्रमा […]
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारत जाँदै, मन्त्रिपरिषद्वारा विदा स्वीकृत
January 1, 2022 N88LeaveaComment on प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारत जाँदै, मन्त्रिपरिषद्वारा विदा स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारत जाने भएका छन् । उनी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत जान लागेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को पुस १५ गते बसेको बैठकले उनको विदा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले शर्माका लागि पुस १८ गतेदेखि ३० गतेसम्मको बिदा स्वीकृत गरेको नेपाली सेनाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ […]
January 1, 2022 N88LeaveaComment on राजावादी एक हुँदै, २७ पौषमा महत्वपूर्ण घोषणा गर्ने
काठमाडौं । राजावादीहरु एक हुने दिशातर्फ बढेका छन् । विगतमा विभाजित र अन्यौलमा परेका राजावादीहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित भएसँगै एक हुने दिशातर्फ बढेका हुन् । राप्रपा नै विगतमा तीन भागमा विभाजित थियो । कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एक भए । राप्रपामा तीन अध्यक्ष रहेर भएको एकतापछि एकता महाधिवेशन […]
नारा एउटा काम अर्कै गरेर नेता-कार्यकर्ता-जनतालाई ठग्दै प्रचण्ड !
January 1, 2022 N88LeaveaComment on नारा एउटा काम अर्कै गरेर नेता-कार्यकर्ता-जनतालाई ठग्दै प्रचण्ड !
काठमाडौं । माओवादी महाधिवेशनअन्तर्गत दस्तावेजमाथि केस्राकेस्रा केलाउने कोशिस गरेका प्रतिनिधिहरुको जिज्ञासामाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएका छन् । तर समाजवादको बाटोमै दस्तावेज अलमलिएको भन्दै उनीहरुले पूर्णतः स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्तावेजमाथि केस्राकेस्रा केलाएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको एउटै निष्कर्ष आएको छ, अब सुध्रिनुको विकल्प छैन […]
January 1, 2022 N88LeaveaComment on जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलकै छोरी अमेरिकामा !
काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धकालमा जनवादी शिक्षाको परिकल्पना गर्दै हजारौँ विद्यार्थीले बलिदान गरे । हजारौ बेपत्ता छन् । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै कार्यकर्तालाई नारा लगाउन नेताहरुकै सर्कलर हुन्थ्यो । २०६३ पछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । माओवादी शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई संगठित गर्न जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षाको प्रचार खुवै हुन्थ्यो । तर, अहिले […]